Wax ka ogow Geed seytuunka ugu cimriga dheer dhulka Falastiin | Radio Himilo
Home / Deegaan / Wax ka ogow Geed seytuunka ugu cimriga dheer dhulka Falastiin
Wax ka ogow Geed seytuunka ugu cimriga dheer dhulka Falastiin
Himilo – Sheekada ku saabsan geed Seytuunka ugu cimriga dheer dhulka Falastiin oo la yiraahdo al-Badawi ayaa dad badan is-weydiinayaan goortuu curtay iyo inta uu sii jiri karo gu’ ahaan.
Geedku wuxuu ku yaallaa xaafadda al-Walaja, oo shan kilomitir u jirta galbeedka Bethlehem, wuxuuna ku fadhiyaa bad dhan 250 mitir oo wareeg balac ah; wuxuuna dherer la’eg yahay 12 mitir oo joog ah.
Jiritaan la’aanta xog sax ah oo la xiriirta cimrigiisa, milkiilaha iyo ilaaliyaha geedkan labaduba iyo sidoo kale wasaaradda beeraha Falastiin waxay qiyaasayaan inuu jiro 4,000-5,000 oo sannadood. Buugaagta aqoonta qaarkood ayaana qoraya inuu yahay midka ugu cimri dheer gudaha Falastiin iyo mid kamid ah kuwa ugu cimriga fog dunida oo dhan.
Sannadkii 2009, wasaaradda beeraha waxay u magacawday ilaaliye qaran Salah Abu Ali, oo ah ninka leh goobta uu geedkani ku yaallo. Abu Ali wuxuu ugu yeera geed Seytuunkan ‘Hooyada dhammaan geedaha Seytuunka. Wuxuuna ku mithaalaa Boqorad ay ku hareeraysan yihiin askar badan – maadaama geedkani ay hareerihiisa ku abuuran yihiin geedo kale oo badan.
Abu Ali wuxuu Al-Monitor u sheegay in geedkan loogu magac-daray Ahmad al-Badawi oo qarnigii 13aad kamid ahaa imaamyada Suufiyada – kaas oo geedkan hoostiisa saacado ku nastay. Waana gadaashiisa markii magacaan uu baxay.
Wuxuu qiray inuusan adduun badan ku qaadanin ilaalinta geedkan. Balse uu isaga ahaan isku arko qof u istaagay ilaalinta dhaxal qaran oo reebaya taariikh sugan.
Geedka Seytuunka ayaa aad uga baxa gobalka Bariga Dhexe. Waxaana uu kamid yahay geedaha uu Eebe ku sheegay Qur’aankiisa. Cilmi-baarisyo iyo baaritaanno lagu sameeyey geedka Seytuunka ayaa lagu ogaaday inuu leeyahay faa’iidooyin badan.
Previous: Tottenham Hotspur oo dooneysa Thomas Meunier
Next: Man United oo loo sheegay lacagta lagu heli karo Ansu Fati